Kaadị vidiyo | January 2020
BDOS WDF vidio nke AMD
Imelite BIOS video vidiyo na-achọkarị ka ọ dị mkpa; nke a nwere ike ịbụ n'ihi ntọhapụ mmelite dị mkpa ma ọ bụ nrụpụta ntọala. Ọtụtụ mgbe, kaadị ndị na-ese foto na-arụ ọrụ nke ọma n'enweghị ihe na-egbukepụ ndụ ya dum, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya, ịkwesịrị ime ihe niile n'ụzọ dị mma ma gbasoo ntụziaka ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ gaghị adị mkpa mgbe ọ bụla iji regharịa ndị ọkwọ ụgbọala kaadị vidiyo, ọ na-abụkarị n'ọnọdụ nke dochie ihe ntanetị arụmọrụ ma ọ bụ arụ ọrụ na-ejighị n'aka nke software arụnyere. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi edozi ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo ma hụ na ọrụ ya.
Gbanyụọ mkpuchi ọkụ nke kaadị vidiyo ahụ
Ihe dị mma nke kọmputa bụ otu n'ime iwu kachasị mkpa a ghaghị agbaso maka ịrụ ọrụ dị mma nke PC. Ekwesiri imezi ka ikuku na-abanye n'ime ikpe ahụ na ahụike nke usoro jụrụ oyi nwere ike ịme ka arụmọrụ nke ngwa nlekota ihe ntanetị dị. N'otu oge ahụ, ọbụna na ngwa ngwa dị elu, kaadi vidiyo nwere ike ịnwụ.
Anyị jikọtara kaadị vidiyo mpụga na laptọọpụ
Laptọọpụ, dị ka ngwaọrụ mkpanaka, na uru niile doro anya, nwere nnukwu azụghachi azụ - ohere ole na ole nke nwelite. Dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị adị mfe mgbe niile iji dochie kaadi vidiyo na nke dị ike karị. Nke a mere n'ihi enweghị njikọ dị mkpa na laptọọpụ motherboard. Tụkwasị na nke ahụ, kaadịadịadị ndị na-agbagharị agbawa adịghị dị ka a na-anọchite anya ya na mkpọsa dịka desktọọpụ.
Otu esi ehichapu kaadị eserese si n'ájá
Fọrọ nke nta ka ihe niile dị na kọmpụta chọrọ nlekọta, gụnyere kaadị vidiyo. Ka oge na-aga, ihe ndị na-agbanwe agbanwe na-ejikọta ájá buru ibu, nke na-ekpuchi sistemụ na-egosi na ọ bụghị nanị site n'èzí, kamakwa ọ na-abanye n'ime. Ihe niile a na-esonyere na nchekwa nke kaadị ahụ dị mma, arụmọrụ ya dị ntakịrị ma ndụ ọrụ dị ntakịrị.
Gbanyụọ kaadị vidiyo dị na komputa
Ihe ntanetị nke oge a nwere ihe dị iche iche nke isi na-eme ka arụmọrụ kachasị dị elu na arụmụka ebe enweghị ngwọta dị. Mgbe ụfọdụ, GPU na-emepụta nsogbu, ma taa, anyị chọrọ ịme ka ị mara ụzọ iji gbanyụọ ya. Ịkwụsị kaadị vidiyo nwere ike ime ka ihe ngosi na-egosi, ihe arụmọrụ na-emekarị ka nsogbu dị na kọmpụta, na ọtụtụ laptọọpụ na-ata ahụhụ site na nsogbu, ebe ngwọta ngwakọ (GPU abụọ, agbakwunyere na ihe dị iche) mgbe ụfọdụ anaghị arụ ọrụ dịka a na-atụ anya ya.
Anyị jikọtara kaadị vidiyo na ike.
Ụfọdụ ụdị kaadị vidiyo chọrọ ike ọzọ iji rụọ ọrụ nke ọma. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na site na motherboard ọ gaghị ekwe omume ịfefe ike dị ukwuu, ya mere njikọ ahụ na-apụta ozugbo site na ike. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi na ihe eriri iji jikọọ ndị na-emepụta ihe nkiri na PSU.
Na okike, e nwere ụdị abụọ nke kaadị eserese: ihe dị iche iche ma dị mkpa. Njirimara na-ejikọta na njikọ PCI-E ma nwee nkpu ha maka ijikọta nyochaa. E jikọtara ya na komputa ma ọ bụ nhazi. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ mere i ji kpebie iji isi vidiyo gbakwunyere, mgbe ahụ, ozi dị n'isiokwu a ga-enyere gị aka ime ya n'emehieghị.
Gbanwee kaadị eserese ngosi
Ọtụtụ mgbe, ọ dị mkpa ka ị gụnye vidiyo nke abụọ site na ndị nwe ya. Ndị na-arụ ọrụ na Desktọpụ enweghị ụdị ajụjụ dị otú ahụ, ebe ọ bụ na desktọọpụ nwere ike ikpebi ihe eji eserese kaadị ndị a na-eji. Maka ezi uche, ọ bara uru ịcheta na ndị ọrụ nke kọmputa ọ bụla nwere ike ịchọta ọnọdụ mgbe ọ dị mkpa iji aka ịmalite kaadị vidiyo dị oke mkpa.
Mgbaàmà nke mgbagwoju kaadị vidiyo
Ndị ọrụ nke kọmputa abụọ na kọmputa na laptọọpụ na-ahụkarị ahịrịokwu ahụ "kaadị kichọpụ." Taa, anyị ga-agbalị ịkọwa ihe okwu ndị a pụtara, yana ịkọwa ihe mgbaàmà nke nsogbu a. Kedu ihe bụ ihe mgbawa? Iji malite, anyị ga-akọwa ihe okwu ahụ bụ "agụba" pụtara. Nkọwa kachasị dị mfe bụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke mgbakwunye nke GPU kristal na mkpụrụ ma ọ bụ n'elu nke osisi na-emebi.
Kedu ka m si na vidiyo vidiyo
Ngwuputa bu usoro ntinye ihe n 'oku. Onye a ma ama bụ Bitcoin, ma a ka nwere ọtụtụ ego na okwu ahụ bụ "Ngwuputa" na-emetụta ha nile. Ọ bụ ihe kacha baa uru na m iji ike nke kaadị vidiyo, n'ihi ya, ọtụtụ ndị ọrụ na-eme ụdị ọrụ a, na-ajụ m nhazi.
Nyochaa ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo ahụ
Ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo bụ isi ihe egosiri na a ghaghị nyochaa n'oge ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eleghara iwu a anya, ịnwere ike ịnwebiga oke ókè nke ihe mgbawa ndị ahụ, nke nwere ike ịpịnye ọ bụghị naanị ọrụ a na-ejighị n'aka, kamakwa ọdịda nke adaba vidiyo dị oke ọnụ.
Ihie njehie mgbe ị na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia
Mgbe ị jikọtara kaadị vidiyo na motherboard, maka ọrụ zuru ezu, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ pụrụ iche - onye ọkwọ ụgbọ ala nke na-enyere sistemụ ahụ aka "ịkwurịta" na nkwụnye. A na-edepụta ihe omume ndị ahụ kpọmkwem na ndị mmepe nke Nvidia (na anyị ikpe) ma dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Nchọpụta nsogbu kaadị vidiyo
Ngosipụta nke mmasị na mmemme nke vidiyo vidiyo bụ ihe ịrịba ama doro anya na onye ọrụ ahụ na-enyo enyo na ọ bụ nkwụnye vidio ya enweghị ike. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi achọpụta na ọ bụ GPU nke kpatara ụta maka ọrụ, na nyochaa ngwọta maka nsogbu ndị a. Mgbaàmà nke arụmọrụ na-enweghị eserese Ka anyị mee ka ọnọdụ dị njọ: ị gbanye kọmputa.
Na-ekpuchi AMD Radeon
Ugbua afọ ole na ole mgbe ị zụtara kọmputa, ị nwere ike ịmalite ihu ọnọdụ mgbe kaadi video ya adịghị akwalite egwuregwu nke oge a. Ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-amalite ngwa ngwa na-ele anya na ngwaike ọhụrụ ahụ, onye ọzọ na-agakwa ụzọ dị iche, na-agbalị ịnwachi kaadị ha. Usoro a ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ bụ na onye na-emepụta ndabara na-esitekarị na-esetịghị ihe kachasị mma nke ntaneti vidiyo.
Na-akpata na ngwọta maka enweghị ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala na kaadị vidiyo
Ọnọdụ na enweghị ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala na kaadị vidiyo bụ ihe nkịtị. Nsogbu ndị dị otú ahụ na-achọ ka ngwọta ozugbo, n'ihi na n'enweghị onye ọkwọ ụgbọala, kama ịnweta kaadị vidiyo, anyị nwere nanị ngwanrọ dị oke ọnụ. Ihe mere software eji jụ itinye ya bụ nnọọ ihe dị ukwuu.
Ogwe njikwa Nvidia Malfunctions
Nchịkọta nchịkọta Nvidia bụ ngwanrọ nke na-enye gị ohere ịhazi ntọala maka kaadị vidiyo na nyochaa. Usoro a, dịka ọ bụla ọzọ, nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, "mebie" ma ọ bụ jụ ịmalite ma ọlị. Isiokwu a ga-ekwu maka ihe mere Panel Nvidia Panel Panel anaghị emeghe, gbasara ihe kpatara na nsogbu maka nsogbu a.
Anyị na-achọpụta ebe nchekwa dị na kaadị vidiyo
Kaadị ebe nchekwa na-echekwa ozi banyere osisi, ihe oyiyi, ihe oyiyi na textures. Ọnụ ebe nchekwa vidiyo na-adabere n'otú oru ngo ma ọ bụ egwuregwu anyị nwere ike isi na kọmputa. N'isiokwu a, anyị ga-aghọta otu ị ga - esi chọpụta ebe nchekwa nke onye nhazi ngwa ngwa. Mpịakọta nke ebe nchekwa vidiyo Nke a bara uru nwere ike ịlele n'ọtụtụ ụzọ: iji mmemme, yana iji ngwaọrụ ngwaọrụ.
Anyị jikọtara kaadị vidiyo na PC motherboard
Idebe onwe gị nke kaadị vidiyo n'ime kọmputa abụghị ọrụ siri ike, mana n'otu oge ahụ, e nwere ọtụtụ nuances a ghaghị iburu n'uche n'oge mgbakọ. Nke a na-enye ntụziaka zuru ezu maka ijikọ kaadị ndịadị na motherboard. Ịwụnye kaadị vidiyo Ọtụtụ ndị ọkachamara na-akwado ịwụnye kaadị vidiyo ikpeazụ, na njedebe ikpeazụ nke mgbakọ kọmputa.
Ụlọ ọrụ kọmputa ọ ga-arụ ọrụ n'enweghị kaadị vidiyo?
E nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe kọmputa nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị kaadị vidiyo etinye na ya. Isiokwu a ga-atụle ohere na nuances nke iji PC dị otú ahụ. Kọmputa na-arụ ọrụ na-enweghị ihe mgbagwoju anya. Azịza nke ajụjụ ahụ e kwuru n'isiokwu nke isiokwu bụ ee. Mana dị ka iwu, ụlọ PC niile dị na batrị vidiyo zuru ezu ma ọ bụ na enwere vidiyo vidiyo pụrụ iche nke dị na kọntaktị bụ isi, nke na-anọchi ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Kaadị vidiyo 2020